HomeIZAO TONTOLO IZAOOSEANIA
Oseana lalamby ary vaovao momba ny fiara fitaterana
Thales dia nandresy ny volavolan-dalàna ho an'ny fanitarana ny ambanin'ny tany ambanivohitra any Sydney ao amin'ny tanàna sy any atsimo andrefana, ary nanao sonia ny fifanarahana Central control and Communications. Ity fifanarahana ity ho fanitarana ny rafi-pitantanana afovoany sy rafi-pifandraisana ao Sydney underground [More ...]
Melbourne, renivohitry ny fanjakan'i Victoria, izay mikendry ny hampitombo ny tanjaky ny angovo azo havaozin'ny 50 isan-jato, dia miasa ny tamba-jotra manontolo amin'ny tanàna miaraka amin'ny angovo azo avy amin'ny masoandro. I Melbourne dia tanàna faharoa lehibe indrindra any Aostralia. [More ...]
Tany Aostralia, ny orinasa mpitrandraka vy, Rio Tinto, dia nandefa tamba-jotra feno fiara misy alàlan'ny robina fiaran-dalamby lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ny tambajotra fiaran-dalamby napetraka ao amin'ny faritr'i Pilbara any Australia Andrefana, eo amin'ny 800 [More ...]
Tany Devonport, Australia, ilay lamasinina tsy nitondra fiara dia tsy voafehy intsony, ka niteraka loza. Araka ny filazan'ny polisy Tasmania, ny lamasinina tsy voafehy tsy voafehy tsy voafehin'i Devonport [More ...]
Any Australia no naratra tamin'ny lozam-piaramanidina 16
Ny mpandeha 16 no naratra satria ny fiaran-dalamby tao Aostralia nanakaiky ny garan-dry Richmond any avaratra andrefan'i Sydney dia tsy nahajanona sy nampandeha ireo mpandeha ary nahatratra ny sakana. Nanao fanambaràna momba ilay loza ny Polisy ao amin'ny New South Wales (NSW) [More ...]
Nanomboka ny fiaran-dalamby voalohany natokana ho an'ny masoandro
Ny fiaran-dalamby mandeha amin'ny herin'ny masoandro voalohany eran-tany dia nanomboka ny diany tamin'ny lalana 3 kilometatra any Australia. Byron Bay Railroad Company nanomboka nampiasa lamasinina mandeha ho azy voalohany eran-tany tany Aostralia. Izao tontolo izao voalohany [More ...]
Ny fiarandalamby voalohany manerana izao tontolo izao tsy misy milina
Fiaran-tany voalohany eran'izao tontolo izao tsy misy mekanika manomboka: ny orinasa mpitrandraka any Shina Rio Tinto dia nanomboka nampiasa fiaran-dalamby feno voalohany. Ankoatra ny sehatry ny mpitrandraka, ny orinasa [More ...]
1500 City dia nampiasa ny fampiharana fampitaovana fampitaovana Moovit
Ny fampidirana Dayton, Ohio avy any Etazonia dia manondro zava-dehibe iray lehibe ho an'i Moovit ary manaporofo fa izy irery no fampiharana ilainao hitaterana an'izao tontolo izao. [More ...]
Ny lamasinina iray manampy ny ankizy hitondra azy ireo isan'andro handehanana any an-tsekoly
Fiaran-dalamby mamela ny ankizy hianatra any am-pianarana isa-maraina: Zavatra mitondra fahasambarana marina no tonga matetika vokatry ny zavatra kely toa izao. Ilay vondron-tany teratany Punmu izay monina any Aostralia Andrefana, fiaran-dalamby avy amin'ny barika [More ...]
Nolavin'ny olona 29 tamin'ny bala sy kamiao tany Aostralia
29 Olona naratra tao Aostralia: Lozabe sy fiarabe nitifitra ny olona 29 naratra vokatry ny fifandonan'ny fiara sy kamio iray tany Melbourne, Australia. Lozam-pifamoivoizana ao amin'ny 8.00 eo an-toerana amin'ny fiampitana eo akaikin'ny Melbourne Zoo [More ...]
Ankizilahy miaraka amin'ny fiaramanidina avy ao Peron
Ilay bandy kely nifanesy teo anelanelan'ny lamasinina sy ny lampihazo: Tao amin'ny gara Cronulla tany Sydney, nianjera teo anelanelan'ny lamasinina sy lampihazo ny zazalahy kely. Hita tao anatin'ny fakantsary fiarovana amin'ny fotoana fohy ny tranga. Araka ny fampahalalana azo tamin'ny hetsika tany Aostralia any Sydney [More ...]
Aostralia, 40 miala tsiny noho ny loza tamin'ny fiaran-dalamby tao Granville tamin'ny herintaona: Niala tsiny ireo fianakavian'ireo namoy havan-tiana tao Granville ny State of New South Wales (NSW) taorian'ny taona 40. 18 Janoary 1977 [More ...]
TCDD no tompon'andraikitra amin'ny delegasiona österreichiana
TCDD nampiantrano ny Delegation Austrian: nisy fivoriana natao teo anelanelan'ny Ankara TCDD sy ny solontenan'ireo orinasa miasa ao amin'ny sehatry ny gara ao amin'ny trano fisakafoanana ao Ankara Gar Tower trano fisakafoanana Behiç Erkin Hall. Ambasadaoron'ny Repoblika Federaly any Aotrisy ho any amin'ilay fihaonana. [More ...]
Tetik'asa iray hanamora ny fitaterana any amin'ny seranam-piaramanidin'i Perth any Aostralia
Tetikasa hanamorana ny fidirana amin'ny seranam-piaramanidina Perth any Aostralia: hisy lalamby vaovao hanamboarana mampitohy ny Forrestfield sy Perth seranam-piaramanidina ao anatin'ny fanambarana farany nataon'ny Western Australia Transportation Authority. Manamora mora any amin'ny seranam-piaramanidina [More ...]